ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Physical ပိုင်းနဲ့ Metal · MyWorld
ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Physical ပိုင်းနဲ့ Metal ပိုင်းကို တိုးတက်အောင် ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
01 Apr 00:00 by Khin Yadanar Win
​အခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံနေတဲ့ကာလမှာ လုပ်ရမယ့်၊ လုပ်သင့်တဲ့အရာတွေလုပ်ပြီးရင် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လည်း အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ တစ်ခြားစိတ်အပန်းပြေ စေမယ့် အရာလေးတွေကိုလဲလုပ်သင့်သလို self-Improvement အတွက် အချိန်ပေးဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်။
Self-Improvement လို့ပြောတဲ့အခါမှာ အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ကြပေမယ့် ကျွန်မအနေတော့ Physical နဲ့ Intelligence အပိုင်းကို အသားပေးလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ရသစာအုပ်တွေအပြင် ကိုယ့် Future Career အတွက် လိုအပ်မယ့် Skill ထပ်ဖြည့်ရမယ့်စာတွေ၊ Language ပိုင်းဆိုင်ရာ Improve ဖြစ်စေမယ့်စာတွေ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေ စသည်ဖြင့် အသားပေးရွေးချယ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ တော်တော်များများလဲ Work From Home တွေလုပ်နေရတော့ တစ်ချို့ဆို အိမ်ပေါ်ကအိမ်အောက်တောင်မဆင်းဖြစ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လိုနေလာတာတွေများလာတော့ Physical ရော Mental ပိုင်းရော အတွက် ထိခိုက်တာမျိုး ငြီးငွေ့တာမျိုးတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ တစ်နေ့ကို မိနစ် (၃၀) ခန့် အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ Body Fitness အတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများ ပေါများသလို ကိုယ်တိုင်ကလဲ များသောအားဖြင့် ရွေးချယ်စားကြပါတယ်။ အခုအိမ်မှာအနေများတဲ့အချိန်တွေမှာ Healthy Food တွေစားဖို့အခွင့်အရေးပါပဲ။ တစ်ပါတ် (၃) ရက်လောက် စာဖြစ်အောင်စားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါ သွက်လက်ပြီး အသားအရေပိုင်းလဲ ထူးခြားလာတာတွေ့ရမှာပါ။
4. Screen Time လျှော့ချခြင်း
Self-Improvement လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ကျွန်မနေနဲ့ ဒီအချက်ကိုဘာလို့ ထည့်ချင်လဲဆိုတော့ လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Issue တွေကြောင့် Social Media ကိုလိုတာထက်ပိုသုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။ သုံးလဲသုံးရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကျန်းမာရေးလဲထိခိုက်သလို Mentally အရလဲ ထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်။ အသေချာဆုံးတစ်ခုကတော့ Time Wasting ပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Social Media သုံးတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ သိသင့်သိရမယ့် Information တွေကိုပဲ ဦးစားပေးကြည့်ရှုပီး Screen Time လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေဆို Screen Time ကို Limit လုပ်လို့ရတဲ့ Function ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကိုယ်ဘယ်နှနာရီပဲသုံးမယ်ဆိုပီး Set လုပ်ထားခြင်းဖြင့်လည်း လျှော့လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ပိုင်း အဲ့ Habit လေးကျင့်သုံးဖြစ်နေတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ အချိန်ပိုထွက်လာပီး တခြားအကျိုးရှိတယ့် Activity တွေလုပ်လို့ရပါတယ်။
စောစောထခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Productivity တိုးပွားစေပြီး အချိန်ပိုထွက်လာပါတယ်။ ကျွန်မကြားဖူးတာဆိုရင် မနက်စောစော နေရောင်ခြည်ဟာ ကျွန်မတို့ ဦးနှောက်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပြီးတော့ Active Mood ကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။
ဒီအချက်ကိုပြောပါဆိုရင် ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အရာမှန်သမျှကိုလေ့လာသင်ယူတာမှန်သမျှ အကုန်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ - ဟင်းချက်နည်းအသစ်လေ့လာခြင်း၊ Language ပိုင်းလေ့လာခြင်း၊ Career အတွက်အထောက်အကူပြုမယ့် Skill များလေ့လာခြင်းစသည်ဖြင့် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး (၁)နာရီလောက် အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။
7. To Do List ထားရှိခြင်း
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ Future မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်၊ လုပ်ချင်တဲ့ အရာလေးတွေကို to do list လေးတွေလုပ်ပြီး ချမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ To Do List လုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့် Goal ကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိပြီးတော့ Effective ဖြစ်စေပါတယ်။
အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်ပြီးတော့ လုပ်လို့လွယ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အေးချမ်းမှုရရှိနိုင်ကြပါစေရှင်။
“Fitter, Healthier, Happier”
​Let’s all be Okay with not to being Okay (Be kind to yourself)
Stress နဲ့ Anxiety တွေလျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Career လမ်းကြောင်းအတွက် Professional Certificate တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
8 days ago by Michelle Hsu
​YES! “FINANCIAL PLANNING” is IMPORTANT for Everyone!!!!
15 days ago by Kyawt Mu Han
Why Myanmar Presents Great Opportunities for Developing Management Skills
လတ်တလောအခြေအနေမှာ အလုပ်ထဲအာရုံစူးစိုက်ၿပီး စိတ်ထည့်မရတဲ့အခါ
about 1 month ago by Htet Naing Toe Oo
ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Physical ပိုင်းနဲ့ Metal ပိုင်းကို တိုးတက်အောင် ဂရုစိုက်နိုင်မယ့...
about 1 month ago by Khin Yadanar Win
about2months ago by Iris Thiri